Political Page ပုလဲသွယ်: Facebook မှာစကားပြောခြင်း (၁၂)
Tue, Dec 4, 2012 at 8:51 PM
Thanks Ko Tint Swe, I knew that explanations can confuse both sides. What is important is “Trust"
Politics as it is seen is not always it seems to be. We need to haveasense of "WE" to developaNATION. Many people are intent on getting things done in the way their side wants. To quote one dictum “Everyone wants peace in their own terms. That isawish. In reality, real life governance, MoUs, treaties, trade agreements are to be honored as bound by international convention. Especially, when it comes to China, President Nixon and National security advisor Henry Kiesinger had learned to deal behind the scene. That approach can achieve better than popular news confrontation or headline events.”
If people continue to say YOU, ME and THEM, instead of WE, this is not good for long term. I knew there are differences in opportunities - it is not just to our country, and withabit of variation in extent. Change will take time and must wait to see gradually. If not, people might suffer. Some event in history, as those we have witnessed at the time of occurrence, needs time to unfold the real scene and the extent of impact. Let's hope things get better towardsapeaceful solution.
Dear my good friend KKA I am glad to read your Philosophy. I have no objection. But allow me to put my two cents!
On ground it is nearly impossible to meet theoretical standard. I also know you quoted real history. My assumption is that Burma case is unique. The so-called change is similar neither to South Africa nor Philippines.
China factor is global. Emotion can’t help. Activist style can’t help out either. We need good brains and reliable partners.
Gradual change in Burma may be written as it happened in the books decades later. But as for now I prefer to quicker change. In every transformation there are people who need to sacrifice. I mean from both sides, those in the power and the sufferers.
Those nonpolitical persons who might have kind heart were silent when unarmed people were brutally and repeatedly killed.
Fortunately both sides are striving for peaceful means. Dhama will help Burma I believe!
Aow Kou Rot: အခု လက်ပန်းတောင်းမှာ ဒဏ်ရာရတဲ့ လူနာတွေက ဖော့စဖာ့းရပ် လောင်ကျွမ်းမှု ဖြစ်နိုင်လား ဆိုတာပါ။ ဖော့စဖားရပ် အောက်ဆီဂျင်နဲ့ ဓါတ်ပြုရင် အပူချိန် ၈ဝဝ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်လောက် ထွက်တယ်လို့ သိထားရတယ်။ အကယ်၍ အဲဒီ အပူချိန်မှာ လောင်ကျွှမ်း ခံရရင် လူတွေ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်မလဲ။ အဲဒါ ဆရာ ဘယ်လိုသုံးသပ်မိလဲ။
DTS: ဆရာ မီးလောင်ဒဏ်ရာ စာ ၂ ပုဒ်ရေးတင်ထားပါတယ်။ ဓါတုလောက်တာ မရေးရသေးပါ။ လေ့လာမှု စုံမှ ရေးရတာ ကောင်းတယ်။ အခုစုံစုံစိစိမလေ့လာရသေးပါ။
Aow Kou Rot: ကျွန်တော် စုံစမ်းထားသလောက်က ဖော့စဖါးရပ် ဖြစ်နိုင်ခြေ အတော် နည်းပါတယ်။ ထိုင်းအခြေစိုက် စစ်ရေးစောင့်ကြည့်တဲ့ ဖိုးတရုတ်ကို မေးတယ် ဖြစ်နိုင်ခြေမရှိလို့ ဆိုတယ်။ HRW က ဖီးရောဘတ်ဆန်ကို မေးတယ်။ သူလည်း မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ပြည်ထောင်စု သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့က ဦးဥာဏ်ထွန်းကို မေးတယ်။ ဖော့စဖါ့ရပ် မပါဘူးလို့ ငြင်းပါတယ်။ ဆရာ့ သုံးသပ်ချက်အရ ဒီမီးလောင် ဒဏ်ရာဟာ အပူချိန် ၁၆ဝ နဲ့ ၂ဝဝ ဒီဂရီ ဝန်းကျင်ကြားမှာ အလောင်ကျွမ်း ခံရတယ်လို့ ကောက်ချက်ချလို့ ရပါသလား။
DTS: အမှန်က FIR ဖွင့်ရမယ်။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက စစ်ရမယ်။ Forensic experts တွေလိုမယ်။ ပညာပိုင်းအလုပ်လဲပါတယ်။ တရားဥပဒေ နဲ့ နိုင်ငံရေးနဲ့ မရသေးဘူး။
Posted by Dr. Tint Swe at 9:14 PM